छिटो पैसा कमाउ, नेपाल जाउ- विविधा - कान्तिपुर समाचार
यस्तै छ कोरियामा हाल !
असार १२, २०७५ गोकुल थोकर
काठमाडौँ — नयाँ कम्पनीमा आएको दुई हप्तामात्रै भयो । ज्यान दुखेर हैरान छु । काम त सजिलै देखिन्छ । त्यही देखिनेले झुक्यायो । साना साना डम्बा छन् । त्यसलाई मिलाएर अलि ठूलो कार्टुनमा हाल्नु र टेप लगाएर चलिरहेको बेल्डमा गुडाउनु, बस् त्यति हो, मैले गर्नु पर्ने । काम कन्फर्म गर्नु पहिले सजिलै देखेरै आउँछु हुन्छ भनेको हुँ ।
पहिलेको कम्पनीमा प्लास्टिकको सामान बन्थ्यो। ठूलो भाँडा फलामको तातो मेसिनमा प्लास्टिकका भाँडा बन्ने दाना हालिन्थ्यो। बजारबाट जस्तो खालको प्लास्टिक भाँडा डिमान्ड आयो। त्यस्तै डिजाइनमा बन्थ्यो। काम त त्यो पनि गाह्रो होइन। तर तातो हुने। बाहिर फुस फुस हिउँ पर्दा पनि आफू भने पुरै पसिनाले भिज्नु पर्ने।
जोखिम पनि थियो। भाँडाको आकार बन्नका लागि प्लास्टिकका दाना दुई सय डिग्रीमा झोल नहुन्जेल पगालिन्थ्यो। कतै झुक्किएर ज्यानमा परे के हुन्थ्यो भन्नै परेन। दुई वर्षअघि एउटा भियतनामी काम गर्दा गर्दै चिप्लेर लड्दा हात टेक्यो रे। अनि हात डढ्यो। कम्पनीमा काम गर्न सकेन। थोरै पैसा दिएर कम्पनीले निकाल्देको रे। पहिलेदेखि काम गर्दै आएका फिलेहरु(फिलिफिन्स नागरिक)अंग्रेजीमा कुरा सुनाउँथे। मलाई पनि त्यति राम्रो कोरियन आउँदैन। त्यसैले अंग्रेजीमै बोल्दिन्छु।
एक वर्ष एउटै कम्पनीमा काम गरे वार्षिक भत्ता (थेजिकम) आउँथ्यो नी। जबरजस्ती बस्ने प्रयास त गरेकै हुँ। तर गर्मी मौसम लागेपछि मेसिनको तातो र बाहिरको तातोले मर्नुभयो। काम गर्दा जति पानी खाए पनि जिउबाट पसिना भएर बग्ने। पिसाब त आउँदै नआउने। पन्ध्र दिन दिउँसो पन्ध्र दिन राति काम गर्ने नियम थियो। गर्मीको पन्ध्र दिन दिउँसो काम गरेपछि बिरामी नै परेँ। नेपालमा हुँदा एक लाख रुपैयाँ महिनाको पाए जस्तो काम पनि गर्छु भन्ने मेरो आत्मविश्वास फेल खायो।
अनि ‘थेजिकम सेजिकम हान गोली’ भनेर मैले एक दिन डराउँदै डराउँदै टुटेफुटेका कोरियन भाषालाई मिलाएर साहुलाई मलाई यता काम गर्दा सन्चो भएन कृपा गरेर लेटर दिनुस न भने।
लेटर दिनु भनेको साहुले मुटु कलेजो दिनु भनेको सुनेछ कि क्याहो चिम्से आँखा झन्डै बाहिर निस्किने गरी हेर्‍यो। सेता गाला रिसले राता भए। एक शब्द नबोली फन्केर हिँड्यो। त्यसपछि आफ्नो हालत बिजोग भो। ग्लानी, रिस र खै केले हो मेरो टाउको निहुरिएको निहुरिएकै भयो। शायद एक लाखको बिटोले थिचेको होला कि? विचरा म, साहुका लागि कामदार भन्दा अरु केही थिइनँ। फगत एउटा भाडाको मान्छे।
शरिरमा शक्ति त थिएन नै। भएको अलिअलिको जाँगर पनि मरेर गयो। जतिखेर पनि साहुले आँखा तरेको मात्रै मनमा आएपछि बिरामी झन् बढ्यो। सायद ‘फ्रस्टेशन’ले पनि काम गर्‍यो होला। घरबाट फोन आँउथ्यो। म काम तिरै छु भन्दिन्थेँ। महिना मरेपछि पैसाका कुरा गरे। मैले ‘हुन्डीको रेट’ बढेको छ। अलि घटे पछि पठाउला भनेँ।
विचरा घरका मान्छेलाई छोराले रुपैयाँ छापेको छापेकै छ भन्ने लागेको हुँदो हो। म पनि नेपालतिर हुँदा त्यस्तै सम्झन्थेँ। विदेश पुगेका पैसाका रुखैमा चढ्छन्। गाँउघरमा डालेघाँस झारे जस्तै भकाभक झार्छन्। अनि भारी बाँध्छन् घर फर्कन्छन्।
झन्डै दुई महिना ओछ्यान सुतेको सुतेकै गरिदिएँ। पहिलेपहिले त बिरामी भएरै सुतेको थेँ। पछि त तन ठीक थियो, मन बिरामी भो। कम्पनीमा काम गर्ने अरु दुई जना नेपाली थिए। ती साथी मलाई हेरेर चिन्ता गर्थे। भन्थे ‘विदेश हो भाइ अलि अलि दु:ख त सहनु पर्‍यो नी। नत्र कसरी पैसा कमाइन्छ त?’
तिनका कुरा बेठीक थिएनन्। मेरो मन मात्र बेठीक थियो। मलाई लाग्यो यो कम्पनी छाड्न पाए तातोले सातो जान लागेको म बाँच्छु। अनि अर्को कम्पनीको काम हेरेर सजिलो काम भए मात्र गर्छु। मन एक तमासको भो।
म दुब्लाएर मरन्च्यासे भएँ। हावाको एक झोक्का आयो भने पनि उडाएर लैजाला जस्तो। पच्हत्तर किलोको म एक्कसी पचपन्न किलोको भएँ। खाने कुरा खानै मन नलाग्ने। जे हेरे पनि वाक्क लाग्ने। साथीहरु बिहानै उठ्थे। खाने कुरा पकाउँथे। अनि काममा जान्थे। भात खाने समयमा ती आउँथे। मलाई पनि भाग लाउँथे। म कहिले खान्थे कहिले खान्न थेँ। धन्न यी साथी थिए र पो म टिकेको छु।
साथीहरुले महिना महिनामा हिसाब सुनाउँथे। तेरो भागमा यति पर्‍यो। म टाउको हल्लाउँथे। हुन्छ तिरौला भन्ने भावमा। कोठाको पैसा तिर्न पर्दैनथ्यो। कम्पनीले नै बस्नेको व्यवस्था गरेको थियो। खासै खर्च के हुन्थ्यो र? बाहिर घुम्न जाँदैन्थेँ। म काठमाडौं हुँदा एक घन्टा फुर्सद् हुँदा पनि साथीभाइसँग चिया गफ नगरी बस्न नसक्ने। दुई महिना एउटै कोठामा बस्न सक्छु भनेर सोचेको पनि थिइनँ।
सबै सोचेको जस्तो कहाँ हुन्छ र? बल्ल लेटर पाएँ। अर्को कम्पनीको लागि अवसर। नोदोम्बो (अर्को कम्पनी खोजी दिने सरकारी कार्यलय) गएँ। सोल नजिक जता भए पनि हुने गरि कम्पनी खोजेँ।
यो कम्पनीमा नेपाली धेरै छन्। काम सजिलै लागेकोथ्यो। अहिले गाह्रो भाको छ।अर्को महिना घर तिर पैसा पठाउनु छ। त्यही भएर यस्ता दुखाई र अप्ठ्यारा मतलब नगरी खट्नु छ। जता पनि पेलिनु पर्ने। निरन्तर। निरन्तर। यस्तै छ कोरियामा हाल !
प्रकाशित : असार १२, २०७५ १४:२७